Oats ngamahashe: kangakanani, kangakanani, nini kwaye kutheni ubanika. | Amahashe eNoti
UJenny monge | | Ukondla
Ukondliwa kwamahashe ethu yinto ehlala isikhathaza. Zeziphi iinkozo zokunika, ngoliphi inani? Ngaba bafumana iiminerali eziyimfuneko kunye neevithamini kwindlela abatya ngayo? Ngaba baneentsilelo? Ngaba kufuneka kunikwe izongezo?
Kweli nqaku masithethe ngesidudu esithile: ihabile. Ezinye iingcali zicebisa ukuba le cereal ibe yenye yezona zifanelekileyo. Nangona kunjalo, izibonelelo kunye nokungalunganga kwe-oats yehashe lethu kuxhomekeke kakhulu kubume bayo bomzimba, isimilo kunye nomsebenzi. Masibone ukuba ibonelela ngee-equines zethu!
Xa simisela okona kutya kulungileyo kumahashe ethu, kufuneka sikhumbule iimpawu zomzimba wenkqubo yokwetyisa: ukuhlafuna ngokucothayo nokunonopheleyo, isisu esinomthamo omncinci ekufuneka ukhutshiwe amatyeli aliqela emini, ithumbu elincinci elenza ukwetyisa ii-enzymes kunye nesihlalo esikhulu sohlaselo lwe-microbial nalapho ukutya kubila.
Yonke loo nto yenza ezi zilwanyana zithambekele kwiingxaki zokuhamba kokutya kunye notshintsho ezifana nokugaya isisu, i-colic, njl.
Ukutya kwabo kufuneka kulungelelaniswe kwaye kuya kuxhomekeka ekubeni isilwanyana sethu senza umsebenzi owomeleleyo okanye hayi. Yilapho badlala khona iinkozo zesiriyeli ezimele umthombo wamandla obalulekileyo kula mahashe afuna inqanaba lamandla aphezulu, umzekelo iimbaleki.
Siza kubona ngokweenkcukacha iimpawu ze-oats njengenxalenye ye- isondlo esilinganayo.
1 Oats ngamahashe
2 Izibonelelo ezizisa kumahashe
3 Nini kwaye njani ukubonelela ngeoats kumahashe ethu?
4 Nika i-oatmeal okokuqala
5 Iindidi zehabile
Oatmeal ngu ukutya okuziinkozo okuqhelekileyo kukutya okulingeneyo. Kunye nerhasi, umbona okanye ingqolowa, yenye yeenkozo eziphambili kwizilwanyana zethu.
Iqulethe ii-carbohydrate ezininzi ezinje ngesitatshi, esiya kuthi sifakwe i-hydrolyzed size sehle siswekile, a Umthombo wamandla oyimfuneko kwimisipha kunye nomsebenzi wehashe. Kubalulekile ukuba ihashe lezemidlalo likhuphe amandla ngokukhawuleza, umzekelo kwimidyarho yeembaleki.
Ngenxa yeempawu ze-oats, amahashe ayanyanzelwa ukuba awuhlafune kakuhle, ngaloo ndlela ukhuthaza ukwetyisa kwawo. Ngokunjalo, njengoko uphawu lwePiensos Pavo luthetha kwiphepha lalo, iswekile ivuselela ingqondo ngokuvelisa i-serotonin. Kuqhelekile ukuba amanye amahashe azive echaphazelekile emva kokutya i-oats, kuba serotonin yi "hormone yolonwabo." Ngokukodwa amahashe anemisebenzi elula anokuba nemincili okanye othuke emva kokungenisa i-oats okanye ezinye iisiriyeli ezinesitatshi.
Izibonelelo ezizisa kumahashe
Ihabile ziqulathe ipesenti ephezulu yamafutha, idluliselwa kwintoni iinwele zikhanya.
Isitatshi kwi-oats sicoleka ngokulula kunezinye iinkozo, ke iswekile iyaphuka ngaphandle kokungena kwaye ingene egazini ngokukhawuleza emva kokungenisa. Oku kubangela ibonelela ngehashe ngamandla ngokukhawuleza okukhulu, ezilungele amahashe ezemidlalo.
Iqulethe i- uxinzelelo oluphezulu lwefayibha kunye nefayibha ekrwada kunezinye iinkozo. Inqanaba eliphezulu lefayibha kubalulekile ukukhusela iingxaki zokwetyisa.
Iswekile emzimbeni ivuselela imveliso ye-serotonin, eyaziwa njengehomoni yolonwabo. Esi siphumo sahlukile kwisampulu nganye kwaye ezinye zinokonwaba ngokumangalisayo. Ngesi sizathu, uninzi lwabanini lubona ukuba amahashe abo avuliwe ngokutya i-oats.. Ukuba olu lonwabo luyabaxwa kwaye lube yingxaki, kukho ezinye iindlela zokondla amahashe ngaphandle kweoats kwaye nangaphandle kweswekile okanye isitatshi.
Nini kwaye njani ukubonelela ngeoats kumahashe ethu?
Kukho oko linda phakathi kweyure enesiqingatha kunye neeyure ezimbini emva kokuzilolonga ukondla amahashe. Kuya kufuneka silumke namanzi kwaye sikuphephe ukusebenzisa kakhulu ngenxa yokudinwa. Lindela ukuphefumla kwehashe ukuze uphumle ngaphambi kokunikezela ngamanzi.
La oatmeal Akulungele ukukhula kwenkonyane, ngoko kungcono ukulinda de isilwanyana sethu sikhule ukuqala ukuyihambisa. Ngaphezulu kwako konke, iya kuba kukutya okuya kulithanda ihashe lethu ukuba lenza umthambo omkhulu mihla le kwaye lifuna amandla. Kwimeko nayiphi na into, rhoqo Ukutya kufuneka kulinganiswe ngokweemfuno zehashe. Ngale ndlela, kufanelekile ukuhlalutya ifula ukukhangela ukusilela kwezondlo.
Nangona iihabile ziluncedo kumahashe ethu ezemidlalo, kufuneka sazi ukuba singawanika njani. Isiriyeli iqulethe i-phosphorus engaphezulu kune-calcium. Kuba kufuneka idityaniswe nokunye ukutya okune calcium ngakumbi kune phosphorus efana ne I-alfalfa. Eyona nto ifanelekileyo yokufumana ukutya okune-calcium kunye ne-phosphorus ngamacandelo ama-2 e-oats kwi-1 yealfalfa.
Nika i-oatmeal okokuqala
Ukuba kukutya okuziinkozo okuphezulu kwiproteni, ukuba ihashe lakho khange litye i-oats ngaphambili, kuya kufuneka uyifake ekutyeni kwakhe inkqubela phambili kunye nenani elincinci. Malunga neegram ezili-100 ngosuku iveki enesiqingatha Kuya kucetyiswa, emva koko kuya kufuneka uhambe Kancinci konyusa isixa ngamaxesha ngeveki okanye iveki enesiqingatha.
E-Spain sinokufumana i-oats mhlophe, golide namnyama. Ngokwesiko, eyona isetyenziswa ngokubanzi imhlophe, ngelixa kumazwe afana neFrance, kukhethwe umnyama. Ukongeza, sinokufumana kwiimarike iindlela ezahlukeneyo zokubonelela ngoku kutya, umzekelo ukusika i-oats okanye iinkozo.
Sika i-oats: Le ndlela yokuhambisa i-oats kukunika isityalo endaweni yengqolowa. Isityalo se-oat sinefayibha eninzi kwaye siyanceda ekwetyiseni.
OatmealKunganikwa iihabile ezizeleyo umhlaba, umanzi, uxotyulwe okanye wenza imicronized. Kule meko, iqokobhe liyavulwa kwaye isilwanyana sinokucola ukutya okuziinkozo ngokufanelekileyo..
I-oats epheleleyo yeenkozo kufuneka ibonelelwe njenge i-oatmeal ngaphandle komgubo, kunye ne-rind epheleleyo kunye ne-fine. Njengoko besesitshilo, ukubonelela nge-oats, kufuneka ihlale idityaniswa nokunye ukutya ukuze ihashe lethu lifumane zonke izakha mzimba eziyimfuneko. Oku kungafezekiswa ngokuhlalutya ifula kunye nokubonelela ngokutya okanye izongezo ngezithako ezingekhoyo kwizilwanyana zethu.
Ukuze ufunde okungakumbi malunga nokondla nokwetyisa amahashe, unokufumana malunga noku zingaphi izisu ihashe linalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amahashe kaNoti » Amahashe » Ukondla » Ihashe oats, isithako sendabuko ekutyeni kwabo